Fitaovana lamba jamba | Shina mpanamboatra sy mpamatsy lamba China
Famoronana ETEX ary mamorona amboara be dia be ny lamba vita amin'ny akora Vertical. Tsy vitan'ny hanome aingam-panahy ny lamaody sy ny hevitra amin'ny lamba ihany koa isika, dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny vokatra lamba. Ny lamba jamba Vertika dia tena lamba nentim-paharazana sy lamaody vita amin'ny jiro hatramin'ny namorona azy in-taonany lasa izay. lamaody tsotra mankany amin'ny varavarankely, mora miasa, mora soloina. Ny fomba fijery lehibe momba ny hazavana namboarina sy ny lamaody avo amin'ny haingon-trano. Mamokatra betsaka kokoa ny ETEX ...
ETEX Serivisy fanoratana an'i Jacquard Roller Blind lamba. Samy vita nandoko lamba Yarn sy Piece. Misy 300 ny famolavolana lamaody jacquard amin'ny famoriantsika. Tsy vitan'ny hanome aingam-panahy ny lamaody sy ny hevitra amin'ny lamba ihany koa isika, dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny vokatra lamba. Roller Blind Fabricant izay mitondra tsiambaratelo ary manampy lamaody any amin'ny toerana rehetra. lasa lamaody kokoa amin'ny indostrian'ny masoandro mamirapiratra satria manampy lamaody mahazatra kokoa eo amin'ny varavarankely izy io, ...
ETEX andian-dranon-tsarin'ny Roller Blind lamba. Tsy vitan'ny hanome aingam-panahy ny lamaody sy ny hevitra amin'ny lamba ihany koa isika, dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny vokatra lamba. Roller Blind Fabricant izay mitondra tsiambaratelo ary manampy lamaody any amin'ny toerana rehetra. lasa lamaody bebe kokoa amin'ny indostrian'ny masoandro mamirapiratra satria manampy lamaody tsotra kokoa eo am-baravarankely, mora miasa, mora soloina. Ny ETEX dia mamorona mihoatra ny 20 ny famolavolana lamba vaovao sy fitaovana lamaody avo lenta. ● Fifanarahana: poloney 100% ...
ETEX Andian-tsarimihetsika Sunscreen Blind lamba. Tsy vitan'ny hanome aingam-panahy ny lamaody sy ny hevitra amin'ny lamba ihany koa isika, dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny vokatra lamba. Sunscreen Roller Blind lamba izay manome fiainana manokana ary koa ny fiasan'ny sivana maivana. lasa lamaody bebe kokoa amin'ny indostrian'ny masoandro mamirapiratra satria manampy lamaody tsotra kokoa eo am-baravarankely, mora miasa, mora soloina. Ny ETEX dia mamorona mihoatra ny 20 ny famolavolana lamba vaovao sy fitaovana lamaody avo lenta. ● Composi ...
Ny akanjon'i Zebra, izay nomena anarana ihany koa lamba fabià, lamba volon-javamaniry, famolavolana mahafinaritra amin'ny fikandrana varavarankely, mahatonga ny fikandrana ho tsara tarehy kokoa amin'ny fijerena. Miorina amin'ny endrika marika marobe, ny lamba Zebra dia manome vahaolana tsara kokoa ho an'ny haingon-trano jamba. Tsy vitan'ny hanome aingam-panahy ny lamaody sy ny hevitra amin'ny lamba ihany koa isika, dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny vokatra lamba. Zebra jamba lamba izay manome fiainana manokana ary manampy lamaody any amin'ny toerana rehetra. lasa lamaody marobe amin'ny hazavana i ...
Ny fanenoman'i ETEX sy fitaovana fanangonana lamba romana sy lambana. Samy lamba sy tsy misy coated. Ny lamba romanina sy lambanina dia mila fahatsapana tanana malefaka fa matevina toy ny roller, ny mora kokoa hanamboatra ny modely sy ny lamba mihantona malefaka amin'ny alokaloka na roman. Ho an'ny lamba romana: ● Fandrafetana: 100% polyester, lamba rongony, na fanenona mifangaro, lalandrana ahina, vovo-tany, landihazo ● Coating: Acrylic Acid of Fandram-borona na tsy misy coating ● Width: 140 / 280cm sakany ● Modely: Plain, Translucent, .. .
Ny ETEX dia mamorona karazana Blackout Roller Blind lamba. 100% mainty miaraka amin'ny fiarovana UV, fanoherana ny feo. Miaraka amin'ny fitaovana coating manokana sy ny takelaka sosona ampy, ny kalitao mainty dia ampy tsara mba hifanaraka amin'ny tara-masoandro avo sy ny toetrandro UV mahery, mateza avo ary tena mainty 100%. Tsy vitan'ny hanome aingam-panahy ny lamaody sy ny hevitra amin'ny lamba ihany koa isika, dia manaraka tsara ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny vokatra lamba. Roller Blind lamba izay manome fiainana manokana ary manampy lamaody t ...